Good vibes — Aeneas
princekham in HIVE-MYANMAR • 17 days ago
ဒီရက်ပိုင်းမှာ အပျက်ဘက်ကို တွေးမိနေသည်။ ကျွန်တော် နဂိုကတည်းက စိတ်ဓါတ်ကျလျှင်သူများထက်ပိုကျတတ်တာကို သတိထားမိသည်။ အခြေအနေအပေါ်မှာ ဘယ်လိုမှ အကောင်းမြင်လို့ မရဖြစ်နေမိသည်။ ဘယ်ဟာလုပ်မယ်တွေးတွေး အခုလို ခေါတ်ဆိုး စနစ်ဆိုးကို ကျော်ပြီးတော့ မတွေးနိုင်၊ စနစ်ဆိုးက ရှေ့ကနေ ကန့်လန့်ပိတ်နေသည်ဟုခံစားရသည်။
အကောင်းမြင်ပါ အကောင်းတွေးပါ ဆိုသော်ငြားလဲ ထင်သလောက်မလွယ်ကူပဲ ဖြစ်နေတာပါ။ အရေးထဲ လည်ချောင်းနာပြီး လူက မအီမသာ ဖြစ်နေတာ သုံးရက်လောက်ရှိပြီ။ မေတ္တာပို့ ၊ ဘုရားဂုဏ်တော်ပွား ကြည့်သည်၊ စိတ်အေးချမ်းမှု ခဏသာရသည်။ နောက်ဆုံး အော် ငါ နေမကောင်း မကျန်းမာ ဖြစ်နေတာဆိုတေ့ မြတ်စွာဘုရားနဲ့ သံဃာတော် အရှင်သူမြတ်တို့ရဲ့ မေတ္တာကို ခံယူရမည်ထင်သည်ဟု အတွေးဝင်လာပြီး မြတ်စွာဘုရား၊ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်နဲ့ ဆရာသမားတို့ရဲ့ မေတ္တာကို အာရုံပြုနေခဲ့မိသည်။ ဆရာသခင်တို့ရဲ့ မျက်နှာတော်တို့ကို မြင်ယောင်မိပြီး ဪ ဒီဆရာသခင်တွေကိုယ့်အပေါ်မှာ မေတ္တာပို့ပေးနေတာပဲ မေတ္တာထားနေတာပဲ ဟု တွေးမိပြီး သူတို့ရဲ့ မေတ္တာဓါတ်ကို ခံစားမိလာသည်။ လှုံခြုံနွေးထွေးသော မေတ္တာဓါတ်ကို ခံစားမိပြီး စိတ်လဲ ပြန်လည်အေးချမ်းလာသလို ခန္ဓာကိုယ်လဲ မအီမသာ ဖြစ်မှုများလဲ သက်သာသွားသည်ဟု ခံစားရမိသည်။ ဆရာသခင်တို့ ဝန်းရံအားပေးနေသည်ဟု ခံစားရမိသည်။
အခြားဘာသာများထဲမှ ခရိယာန်ဘာသာတို့ ပြုလုပ်လေ့ရှိသော ထမင်းမစားခင် ဘုရားသခင်၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးကို အောက်မေ့ ချီးမွန်းခြင်း အလေ့အထကို သဘောကျမိသည်။ မိမိတို့ရဲ့ စိတ်ခွန်အားအတွက် ဂုဏ်ကျေးဇူးကို ချီးမွန်းခြင်း၊ ကျေးဇူးတင်ခြင်း၊ မေတ္တာတော်ကို ခံယူခြင်းတို့သည် အရေးပါလှသည်ဟု ထင်မိပါသည်။ မိမိတို့ရဲ့ vibration ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ရန် နည်းလမ်းများအနက် "ကျေးဇူးတရားသိတတ်ခြင်း" ဆိုသော အချက်ပါပါသည်။ (တခြားအချက်များကို အင်တာနက်တွင်ရှာပြီး ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။) ကျွန်တော့်အနေနဲ့ Good vibration ကို ဖြစ်စေသော အချက်များထဲတွင် "သူတော်ကောင်းတို့ပိုသသော မေတ္တာကို အာရုံပြု ခံယူခြင်း" ဆိုတဲ့အချက်ကို ထည့်သွင်း ချင်ပါသည်။
မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လဲ အခြားဘာသာဖြစ်ပါက ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်း တို့ရဲ့ မေတ္တာကို ခံယူကြည့်စေချင်ပါသည်။ မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ စိတ်ခွန်အားဖြစ်စေသော အခြား အလေ့အကျင့်ကောင်းများရှိပါက comment မှာ ရေးပေးနိုင်ပါသည်။ အားလုံးကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါစေ။
17 days ago in HIVE-MYANMAR by princekham
asterkame 17 days ago
After reading your post, got some good thinking!
princekham 16 days ago
@princekham(2/5) tipped @htwegyi (x1)
princekham tipped suhlaing (x1)
princekham tipped myanmarkoko (x1)
myanmarkoko 16 days ago (edited)
ချီးမွမ်းခြင်းက အရေးပါတယ်။ ပြီးတော့ စိတ်ပညာ
စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲမှာ ဖတ်ဖူးတယ်။ ကျေးဇူးတင်ခြင်းက
မိမိစိတ်ကိုပြောင်းလဲသွားစေတယ်။ လောကမှာ အရာအားလုံးကို
ပိုင်ဆိုင်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် မိမိမှာ ရရှိထားတဲ့
အရာတွေကို ကျေးဇူးတင်ရပါမယ်တဲ့။ အနောက်တိုင်းအတွေးခေါ်လို့
ထင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော် ဟိုတယ်မှာ ဝန်ထမ်းလုပ်ခဲ့
တယ်။ English တွေက သူတို့ကို ဘာပဲလုပ်ပေးလုပ်ပေး။
အမြဲ Thank You ကိုသုံးကြတယ်။ ပစ္စည်းသယ်ပေးတာ၊
တံခါးဖွင့်ပေးတာကအစ Thank you လို့ပြောတယ်။
တမံကာလျှံကာ ပြောခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျ။ ရင်ထဲကကို လိုက်လိုက်
လှဲလှဲ ပြောတာ။ အဲ့တော့ အရာအားလုံးကို အကောင်းမြင်တယ်။
ဒါကြောင့် သူတို့ကိုကြည့်လိုက်ရင် အမြဲ Active ဖြစ်နေတယိ။
မြန်မာတွေက အဲ့ဓလေ့မရှိဘူး။ ရေဆာလို့ ရေတိုက်ရင်တောင်
တချို့က ကျေးဇူးလို့ မပြောတက်ကြဘူး။
အင်း အကိုမျှဝေပေးတဲ့အကြောင်းရာလေးကြောင့် အတွေးရှည်သွား
ဟုတ် မျှဝေပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
suhlaing 16 days ago
အ​လေ့အကျင့်​ကောင်းဆိုတာ ​မွေးမြူယူရပါတယ် ကျမ​တော့ အပျက်အ​တွေးဝင်လာရင် ​မေတ္တာပို့ဖြစ်တယ်!LOLZ
ဟုတ်ကဲ့။ ကောင်းမွန်တဲ့ အလေ့ အကျင့်ကောင်းပါ။ Thank you for sharing !LUV !PIZZA
@princekham(1/4) gave you LUV. H-E tools | discord | community | <>< daily
htwegyi 16 days ago
ကိုယ်ထက် ဆိုးသုတေဆိုးူသတွေကြည့်၍ အားတ
ဟုတ် ကဲ့ ။ ကိုယ့်ထက် အခြေအနေဆိုးတဲ့သူတော့ရှိနေမှာပါပဲ။